Wararkii Ugu Dambeeyey Ee Wargeysyada England Saaka Oo 1 Juni Ah Ka Qoreen Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Wararkii Ugu Dambeeyey Ee Wargeysyada England Saaka Oo 1 Juni Ah Ka Qoreen Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda
Wararkii Ugu Dambeeyey Ee Wargeysyada England Saaka Oo 1 Juni Ah Ka Qoreen Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 1-06-16 7:55 AM Kooxda dhowaan usoo dallacday horyaalka heerka koowaad England Premier League ee Middlesbrough ayaa bartilmaameedsaneysa weeraryahanka Sevilla ahna ku guuleystaha Koobka Adduunka Fernando Llorente.
Weeraryahanka Juventus Alvaro Morata ayaa isha ku haya inuu dhammeystiro xagaagaan heshiis uu dib ugula laabanayo kooxdiisii hore ee Real Madrid laakiin wuxuu diiday inuu meesha ka saaro u dhaqaaqista horyaalka Premier League, iyadoo Manchester United iyo Arsenal ay ka mid yihiin kooxaha xiisaha u qaba.
Andriy Shevchenko ayaa u sheegay kooxdiisii hore AC Milan inay la saxiixato gooldhaliyaha kooxda Dynamo Kiev iyo xulka Ukraine Andriy Yarmolenko.
Real Madrid ayaa bartilmaameedsaneysa xiddiga kooxda Juventus Paul Pogba haddii uu diyaar ku tahay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda xagaagaan, hadalkaan waxaa xaqiijiyey madaxwaynaha Los Blancos Florentino Perez.
Xiddiga Barcelona iyo xulka Argentina Lionel Messi ayaa ka maqnaa maxkamadda lagu saarayo canshuur uu qiyaamay awgeed maalintii ugu horreysay ka hor inta uusan ciyaarin tartanka Copa America Centenario.
Goolhayihii hore ee ay jeclaayeen taageereyaasha Liverpool Pepe Reina ayaa laga yaabaa inuu dib ugu soo laabto Anfield Road, iyadoo tababare Jurgen Klopp uu isha ku hayo inuu kooxda dib ugu soo celiyo goolhayaha reer Spain.
Tottenham ayaa heshiis ay kula soo wareegeyso kula jirta gooldhaliye Alexandre Lacazette balse Lyon ayaa qiimo lacageed oo walli ah ku dooneysa xiddiga reer France taasoo dhabarjab ku ah Spurs.
Tababarihii hore ee Chelsea Roberto Di Matteo ayaa qarka u saaran inuu noqdo macalinka cusub ee kooxda u laabatay horyaalka heerka labaad ee Aston Villa isagoo Isbuucii mushaar ahaan u qaadan doona 35 kun oo ginni.
Tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayey ka go’an taahy inuu halyeeyga The Kop goolhaye Pepe Reina dib ugu soo celiyo Anfield Road ka dib markii uu dhacay qandaraaskii uu kula joogay kooxda Napoli.
Weeraryahanka Paris Saint-Germain Edinson Cavani ayaa si maldahan u tilmaamay in laga yaabo inuu xagaagaan u dhaqaaqo kooxda Atletico Madrid.
Heshiiska uu daafaca dambeedka midig ee Barcelona Dani Alves ugu wareegayo Juventus ayaa la xaqiijin doonaa maalmo gudahood, sida ay sheegayaan warbaahinta Italy.
Bayern Munich ayaa iska diiday dalab 38 milyan oo ginni oo ay Real Madrid kasoo gudbisay daafaca dambeedka bidix ee reer Austria isla markaana ka ciyaari kara qadka dhexe David Alaba.
Bartilmaameedka kooxaha Manchester United iyo Chelsea Paul Pogba ayaa guri ka raadsanaya magaalada Barcelona, taaasoo Catalans ka dhigeysa kooxda ugu cadcad saxiixiisa, sida ay sheegayaan warbaahinta Spain.
Weeraryahanka Real Madrid Karim Benzema ayaa laga yaabaa inuu xagaagaan usoo dhaqaaqo Manchester United isla markaana uu la midoobo tababarihiisii hore Jose Mourinho.
Kooxaha Liverpool, Chelsea iyo Paris Saint-Germain ayaa ku dagaalamaya saxiixa daafaca dambeedka dhexe ee kooxda AS Roma iyo xulka Germany Antonio Rudiger oo lagu qiimeeyo 22 milyan oo ginni.
Kooxda heysata horyaalka La Liga ee Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay kula soo biirtay Manchester United loolanka loogu jiro saxiixa xididga qadka dhexe ee kooxda Sevilla Grzegorz Krychowiak.
Arsenal ayaa indhaha la raaceysa daafaca kooxda Inter Milan Jeison Murillo, balse waxay tartan ku aadan saxiixiisa kala kulmeysaa kooxaha Leicester City iyo Stoke City.
Tottenham ayaa lagu soo waramayaa inay ka fikireyso inay xagaagaan lasoo wareegto xiddiga dhallintayar ee kooxda Ajax ee dalka Holland Riechedly Bazoer.
Tababare Jurgen Klopp iyo kooxdiisa Liverpool ayaa helay khabar wanaagsan iyadoo loo sheegay inay lasoo saxiixan karaan weeraryahanka kooxda Atletico Nacional ee Marlos Moreno.
Giuseppe Rossi waxay aheyd inuu doorto u ciyaarista xulka qaranka Mareykanka bedelkii xulkiisa haatan ee Italy, sidaasi waxaa yiri wakiilka gooldhaliyaha kooxda Fiorentina.
Garabka xulka Wales George Williams ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay ka hor imaanshiyaha saaxiibkiisii hore ee kooxda MK Dons ee Dele Alli iyadoo xulalkoodu ay